Okuhambayo EYurophu On A Amathiphu Ibhajethi | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Okuhambayo EYurophu On A Amathiphu Ibhajethi
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 10/04/2021)
Okuhambayo eYurophu ngebhajethi kuyinselele! Nokho, kungenzeka inqobo nje uma ukwenza ucwaningo lwakho ukuze ukuhlela uhambo lwakho ngokuhlakanipha. Kungase kukumangaze ukwazi ukuthi kungakanani ungagcina ngokuthatha Imodi kwesokudla yezokuthutha noma ngokukhetha izindawo eshibhile. Themba nathi; kukhona izindlela isabelomali-friendly yonke into kanye uhambo lwakho - kusukela ezikhangayo zokuhamba ukuze ukudla indawo.
Khumbula, abahambi ngebhajethi akuzona "abampofu:"Abantu bayazivikela futhi savvy! Ngakho-ke ngaphambi uya ukuzidabukela, cabanga ngayo yonke imali yensimu uyosindisa ngenkathi Usenza izinkumbulo ezithandekayo. Isabelomali sakho sincane kantsi eziyigugu; Ngakho-ke, kufanele uyiphatha ngokunakekela. Nawa amathiphu ethu ophezulu we-e-Europe ngebhajethi:
Uhlela Umzila Yakho
Yakha uhambo lwakho ngaphambi yini enye. Akungatshazwa, uthola uhlu Kumelwe-uvakashele izindawo European. Uma sibhekana namaqiniso, awukwazi uvakashele bonke uma uvakashela Europe ngebhajethi, ikakhulukazi uma isikhathi sakho njengoba kungagcini ngokuthi ibhajethi yakho. Ngakho esikhundleni baphokophelele ukukubona konke, thatha phezulu amabili noma amathathu. Manje hlola ibalazwe ukuze ubone ukuthi amadolobha uku ucabangela kulula ukuxhuma, yini futhi nezinye madolobha kanye ukuthi umzila.
Ngokwesibonelo, ungase ube nentshisekelo ngokuvakashela Paris kanye Amsterdam. Hlola indlela, futhi uzobona ukuthi Brussels yidolobha elise phakathi kwalezi zinto zombili! ngokukhetha amadolobha ukuthi ukuxhuma, noma lezo eziphakathi kokubili izindawo zokuphupha, ungathola bang esengeziwe impunzi yakho.
Uthola amazinga best uma agcinele yakho ihhotela noma amakamelo ehostela kusengaphambili. I ngaphambili, ngcono. Khetha indawo yokuhlala yakho ngokuhlakanipha.
Nakuba Suites emahhotela 5-star kusho induduzo ephelele futhi okunethezeka, bengekho choice smart lapho sisebenzelana ibhajethi Friend. Ngaphezu kwalokho, ngokuhlala i ehhotela ezibizayo bekuyosho ukuchitha imali yakho, ikakhulukazi uma uhambo lwakho kuhilela ubuke futhi ukuhlola Idolobha. Kusho uzoba kuphela usebenzisa egumbini iphahlazeke bese isikhathi esiningi sokuphila izinsuku zakho futhi mayelana.
Uma ufuna ukulondoloza, ungase uhlale nge wendawo mahhala ngokuvakashela izihambi Ukuhwebelana. Okunye zokulala ezishibhile zihlanganisa amahostela ukuthi izindawo sipho ehostela-isitayela. Igumbi lokuqasha ezimakethe online ezifana Airbnb kukhona enh ojikelezayo e-Europe ngebhajethi.
Yidla Like a Local uma uvakashela Europe ngebhajethi
okujabulisa gastronomic zikhona yonke indawo e-Europe. Kodwa uma uhamba eYurophu ngebhajethi, into ehlakaniphile ongayenza ukugwema ukudla ezindaweni ezibizayo zabavakashi. Ungavumeli yokudlela izikweletu aphule ibhajethi yakho ukudla.
Kunalokho, udle efana lendawo futhi uthole kwamasiko yangempela nakho. nezitebele zamahhashi Ukudla ukudla emgwaqweni awasuki amadolobha aseYurophu, futhi uwena ezidonsela ophelele cuisine eyiqiniso. Futhi le ngxenye best wukuthi uzobona kuphela kubiza ambalwa euro. Uma ufuna ukulondoloza ku ukudla, hit esitolo. Uma ukuhlala egunjini elalikade unendlela ukupheka, ukuthenga izinongo ukudla okuthile ebesingakaze ungakwazi kalula wenze.
Lala phezu zemininingwane
Sleeping esitimeleni phakathi izindawo mhlawumbe omunye amathiphu esizithandayo abantu e-Europe ngebhajethi. Esikhundleni zokuchitha eyigugu amahora emini sisendleleni, ukhetha ukuya isitimela sasebusuku. Kungase kukumangaze ukwazi ukuthi ishibhile kuba kuka ekubhukeni kwamahhotela ebusuku. Impela, uzoba miss kwenkundla, kodwa uzoba uvuke kahle waphumula emzini omusha!
Ready to start traveling in Europe on a budget and ukubhuka isitimela? amathikithi Incwadi isitimela ekuseni bese uthole amadili best izihlalo!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-budget%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#isabelomali #traveleurope budgettravel cheaptravel savemoney